China Dodecyl Trimethyl Ammonium Chloride ， CAS Nke 112-00-5，1231 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Kerui Chemicals
Amine Na-arụ Ọrụ & Amide
Fatịlaịza Acid Chloride
Diotyl Dimethyl Amonium Chloride
Octyl dimethyl nke atọ amine (DMA8)
2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (8EO) Nke abụọ
2-Hydroxyethyl Lauryl Amine (15o)
N, N, N ‘, N”, N ”-Penta methyl diethylene triamine
Ọkpụkpụ Dimethyl Betaine BS-18
Cocoamidopropyl Betaine tagzi
Ọrịa Acid Acid (0812)
Ọrịa Acid Acid (0816)
Ọdụdụ Acid Fatty (1214)
Fatịlaịza Acid chloride (1218)
Ngwa nke betai ...
Okwu Mmalite nke Basic Knowl ...
Ngwa nke Surfactant i ...
Dị njirimara nke am ...
Itoolu nke cationic ...
Tinye: 1711 #, Buildinglọ 6, Lingyu, Guihe Jinjie, Luneng Lingxiu City, Shizhong District, Jinan City, China
Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231) ihe atụ
CAS Nke 112-00-5
Aha ahia: 1231
Quaternary ammonium nnu 1231
Cationic quaternary ammonium nnu 1231
Dodecyl trimethyl ammonium chloride(1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) eji mee ihe dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ihe eji akọ ugbo, yana mmiri ọgwụ eji egwu mmiri.
A na-eji Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) mee ihe dị ka ihe ndị na-emegide antistatic maka eriri sịntetik yana kwa ihe dị nro na antistatic na textile na ọrụ kemịkal kwa ụbọchị.
Enwere ike iji Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) dị ka emulsifiers na pigmenti, dyes na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
A pụrụ iji Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) mee ihe dị ka emulsifier nwere nnukwu mmiri na-eguzogide mmiri na mmanụ emulsion apịtị mgbe ọ na-egwu olulu miri emi na ụlọ ọrụ mmanụ, yana ịhapụ ndị ọrụ na ndị nọpụrụ iche na emulsion.
Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) nwekwara ike-eji dị ka ihe dị oké ọnụ ahịa metal wepụ maka nkewa nke obere ụwa ọcha na nkewa nke niobium, antimony na chromium, wdg; enwere ike iji ya dị ka onye na-agwọ ọrịa hemolytic na nyocha nke ọbara;
Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) nwere nkọwapụta ọdịnaya 98%, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, biko kpọọ maka nkọwa.
50Kg, 175Kg, 200Kg na plastik drum, ihe ndị ahịa chọrọ. Nchekwa maka otu afọ na mma ụlọ na nkụ.
Octadecyl trimethyl ammonium chloride (1231) bụ ihe akụrụngwa nke njikọ njikọ kemịkalụ, zere ịkpọtụrụ anya na anụ ahụ, ozugbo akpọtụrụ, jiri mmiri mee.
Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara. Featured ngwaahịa - Sitemap